आर्मोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन समाचार औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल कम्पनी समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस औषधि बनाम मित्र खेलहरु कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> आर्मोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
जहाँ स्वास्थ्य बीमा बिना एक डाक्टर हेर्न
यदि तपाईं रातको शिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ भने दिनभरि निन्द्राको साथ संघर्ष गर्न सक्नुहुन्छ। तर आर्मोडाफिनिल (नुविगिल) वा मोड्याफिनिल (प्रोविगिल) जस्ता उचित उपचारको साथ, तपाईं जागा बस्न सक्नुहुन्छ र अधिक सतर्क महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यी औषधीहरू सिफारिस गर्न सकिन्छ यदि तपाईंलाई शिफ्ट वर्क डिसअर्डर (SWD), नार्कोलेप्सी, वा अवरोधक निद्रा एपनिया (OSA) को लागी पत्ता लागेको छ भने। जागृति-बढावा दिने एजेन्टहरूको रूपमा, आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलको उत्तेजक जस्तै प्रभावहरू छन्।
यद्यपि उनीहरूको कार्यको सही संयन्त्र अज्ञात छ, armodafinil र modafinil केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) मा काम गर्दछ र मस्तिष्क मा डोपामाइन गतिविधि बढाउन विश्वास गरिन्छ। तिनीहरूको प्रभावहरू अन्य उत्तेजकहरू जस्तै हुन सक्छ एम्फैटामाइन (Adderall) र methylphenidate (Concerta) जस्तै। जे होस्, तिनीहरू संरचनात्मक रूपमा अन्य उत्तेजकहरू भन्दा फरक छन्।
दुबै आर्मोडाफिनिल र मोड्याफिनिल तालिका IV औषधी हुन् जुन दुर्व्यवहार र निर्भरताका लागि कम सम्भावना हुन्छ। तिनीहरू नियन्त्रित पदार्थहरू मात्रै प्रिस्क्रिप्सनसँग उपलब्ध छन्।
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
नुवाविल ब्रान्ड अन्तर्गत बिक्री गरिएको आर्मोडाफिनिल, मोडाफिनिलको तुलनामा नयाँ औषधि हो। यो २००af मा Modafinil को R-enantiomer को रूप मा अनुमोदित भएको थियो। एन्टाइओमरहरू अणुहरू हुन् जो एक अर्काको मिरर छवि हुन् - सोच्नुहोस् बायाँ र दायाँ हातको ग्लोभहरू। यस तरिकाले, मोडोफिनेलसँग मोडफिनिलको तुलनामा थोरै फरक रासायनिक संरचना छ।
मोरोडाफिनिल (ब्रान्ड-नाम Provigil) को तुलनामा आर्मोडाफिनिलको लामो आधा जीवन हुन सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, आर्मोडाफिनिल राम्रो जागोपन प्रभावको साथ एक मजबूत औषधि मानिन्छ। जबकि दुबै औषधिको समान साइड इफेक्ट हुन सक्छ, केहि साइड इफेक्टहरु एक अर्को बनाम एक औषधीमा अधिक सामान्य हुन सक्छ।
Armodafinil र modafinil बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग उत्तेजक-जस्तो औषधि
Wakefulness प्रचार एजेंट उत्तेजक-जस्तो औषधि
Wakefulness प्रचार एजेंट
ब्रान्ड नाम के हो? नुभिगिल Provigil
मानक खुराक के हो? प्रति दिन १ mg० मिलीग्राम २०० मिलीग्राम प्रति दिन एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घकालीन वा एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित रूपमा दीर्घकालीन वा एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित रूपमा
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र युवा वयस्क १ 17 बर्ष र माथिका वयस्क र युवा वयस्क १ 17 बर्ष र माथिका
आर्मोडाफिनिलमा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Armodafinil मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरू armodafinil र modafinil द्वारा उपचार
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल प्रिस्क्रिप्शन ड्रगहरू हुन् जुन दिनको निन्द्राको उपचार गर्नका लागि एफडीए-अनुमोदित हो, जो कि नार्कोलेप्सी, शिफ्ट वर्क डिसअर्डर, र अवरोधक निद्रा एपनियासँग सम्बन्धित छ। यी चिकित्सा अवस्थाहरूलाई आरामको अपर्याप्त भावनाहरूले चित्रण गर्छ जुन अत्यधिक निन्द्रामा परिणाम दिन्छ। दुबै औषधिहरूले दिनभर अत्यधिक थकान र निद्राको साथ संघर्ष गर्नेहरूमा जागृति सुधार गर्दछ।
Armodafinil र modafinil पनि अफ-लेबल उद्देश्यको लागि अध्ययन गरिएको छ। केहि अध्ययन देखाउनुहोस् कि मोडाफिनिल थकानको लागि एक प्रभावकारी उपचार विकल्प हुन सक्छ जुन क्यान्सर र क्यान्सर उपचारको परिणाम स्वरूप देखा पर्दछ। वयस्कहरू जो सक्रिय रूपमा क्यान्सर उपचार प्राप्त गर्दैछन्, मोडाफिनिलले केमोथेरापीबाट अत्यधिक थकानलाई अफसेट गर्न मद्दत गर्दछ।
तीसँग बहु स्क्लेरोसिस , Modafinil को कम खुराक थकानका लक्षणहरूको उपचारको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ। जहाँसम्म, धेरै डाटा सुझाव दिन्छ कि Modafinil यस सर्तको लागि पहिलो-लाइन विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
अन्य अफ-लेबल प्रयोगहरू मनोरोग विकार जस्ता उपचारको लागि समावेश गर्दछ डिप्रेसन र ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD)। आर्मोडाफिनिल वा मोडाफिनिल यी विकारहरूको लक्षणहरूको उपचारको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ तर उनीहरूलाई प्रारम्भिक उपचार विकल्पहरूको रूपमा सिफारिश गरिदैन।
सर्त आर्मोडाफिनिल Modafinil
सिफ्ट कार्य विकार हो हो
अवरोधक निद्रा एपनिया हो हो
क्यान्सर सम्बन्धित थकान अफ-लेबल अफ-लेबल
बहु स्क्लेरोसिस सम्बन्धित थकान अफ-लेबल अफ-लेबल
मनोवैज्ञानिक विकारहरू जस्तै उदासीनता र ADHD अफ-लेबल अफ-लेबल
Modafinil मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Modafinil मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
के armodafinil वा modafinil अधिक प्रभावी छ?
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल निद्रा विकारहरू जस्तै नर्ककोलेसी, अवरोधक निद्रा एपनिया, र शिफ्ट वर्क डिसअर्डरबाट निद्राको उपचारको लागि त्यस्तै प्रभावकारी छन्। जे होस्, आर्मोडाफिनिलले मोडाफिनिलको तुलनामा लामो समयदेखि चिरस्थायी प्रभाव पार्न सक्छ।
१२ हप्ताको अनियमित, क्लिनिकल परीक्षण, दुबै आर्मोडाफिनिल र मोड्याफिनिल निन्द्रामा सुधार नाईट शिफ्टमा काम गर्ने विषयहरूमा। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि आर्मोडाफिनिल र मोडफिनिल समान सुरक्षा स्कोरको साथ तुलना गर्न सकिन्छ।
मा मेटा-विश्लेषण अवरोधक निद्रा एपनियाको लागि आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलको तुलना गर्दा, दुबै औषधी निद्राको उपचारको लागि प्रभावकारी देखिए। या त औषधि लिने बिरामीहरूले साइड इफेक्ट र अनुभव दिनको ब्यूँझिएको सुधार भयो।
आर्मोडाफिनिल उच्च भएको देखाइएको छ प्लाज्मा सांद्रता दिन पछि शरीरमा। शरीरमा उच्च आर्मोडाफिनिल स्तर मोडफिनिलको तुलनामा राम्रो जागृति हुन सक्छ।
जहाँ कि त औषधी अत्यधिक निन्द्रा को लागी एक उपचार को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, चिकित्सा सल्लाह को लागी एक डाक्टर संग सल्लाह गर्न राम्रो हुन्छ। हाल, त्यहाँ कुनै निश्चित अध्ययनहरू छैनन् जुन एक अर्को भन्दा बढी प्रभावकारी छ भन्दछ।
कभरेज र आर्मोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिलको लागत तुलना
आर्मोडाफिनिल सामान्यतया २ 250० मिलीग्राम ट्याब्लेटको रूपमा प्रतिदिन एक पटक लिइन्छ। यो जेनेरिक औषधिको रूपमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छ जुन मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा ढाकिएको छ। जेनेरिक नुविगिलले औसत रिटेल मूल्य $ 500 भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दछ। यो मूल्य एकलकेयर छुट कार्डको साथ तल ल्याउन सकिन्छ। उच्च मूल्य तिर्नुको सट्टा, आर्मोडाफिनिल as २77 को रूपमा कममा किन्न सकिन्छ।
तपाइँको बीमा योजना को आधार मा, Modafinil कभर हुन सक्छ। वास्तवमा, मेडिकेयर र धेरै जसो बीमा योजनाहरूले अनुमोदित उद्देश्यको लागि मोडफिनिल समेट्छन्। Modafinil को औसत लागत $ 600 भन्दा अधिक लाग्न सक्छ। भाग लिई रहेका फार्मेसीहरूमा तपाईले पैसा बचत गर्नको लागि एकलकेयर बचत कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Modafinil को बचत बचत को लागी तपाइँ कुन फार्मसी को उपयोग मा निर्भर use 35- $ 280 को कम मूल्य परिणाम गर्न सक्दछ।
मानक खुराक १ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट २०० मिलीग्राम ट्याब्लेट
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ १-- $ २१। $ ११- $2.२
एकलकेयर लागत7२7। । -$- $ २0०
आर्मोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिलको साझा साइड इफेक्टहरू
एर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलसँग सम्बन्धित सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, चक्कर आउने र अनिद्रा हो। Modafinil अधिक कारण हुन सक्छ साइड इफेक्ट जस्तै घबराहट, नाकको भीड (राइनाइटिस), पखाला, र ढाड दुख्ने।
दुबै औषधीहरूले पनि सुक्खा मुख, अपच (डिस्पेप्सिया), र चिन्ता निम्त्याउन सक्छ। वजन घटाउन सम्बन्धित साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ। केहि मानिसहरु जसले armodafinil वा modafinil लिन्छ भोक कम हुन सक्छ।
अन्य दुर्लभ तर गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा एलर्जी प्रतिक्रियाहरू जस्तै पुराना र सासको कमी समावेश छ। मनोवैज्ञानिक साइड इफेक्टहरू जस्तै डिप्रेशन वा साइकोसिस पनि सम्भव छ। यदि तपाईंले यी साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्नुभयो भने चिकित्सा ध्यान दिनुहोस्।
टाउको दुखाई हो १%% हो 4%
मतली हो %% हो एघार%
नर्भस हो १% हो %%
ढाड दुख्नु हैन - हो %%
नाकको भीड हैन - हो %%
अपच हो दुई% हो %%
सुख्खा मुख हो %% हो %%
चिन्ता हो %% हो %%
भोक कम भयो हो १% हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( आर्मोडाफिनिल ), डेलीमेड ( modafinil )
मोरोडाफिनिल बनाउने ईरमोडाफिनिलको ड्रग अन्तर्क्रिया
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले समान ड्रग अन्तर्क्रियाको धेरै साझा गर्छन्। यी औषधीहरूले CYP3A4 एन्जाइम र CYP2C19 एंजाइमको अवरोधकहरूको रूपमा कार्य गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दहरुमा, ती कसरी प्रभाव पार्न सक्छन् केहि ड्रगहरू शरीरमा प्रशोधन हुन्छन्।
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले स्टेरोइडलको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ contraceptives । गर्भनिरोधका वैकल्पिक विधिहरू एर्मोडाफिनिल वा मोडाफिनिलको साथ उपचारको क्रममा सिफारिस गरिन्छ र यी औषधिहरू बन्द गरेपछि एक महिनासम्म।
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले शरीरबाट साइक्लोस्पोरिन खाली गर्ने क्षमता बढाउन सक्छ। यदि सँगै लिएको छ भने, cyclosporine को प्रभावकारिता कम गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले अन्य औषधीहरूको स्तरमा सीवाईपी २ सी १ subst सब्सट्रेट्स भनेर चिनिन्छ। बढेको औषधि स्तरले प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याउन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास आर्मोडाफिनिल Modafinil
Norethindrone स्टेरॉइडल गर्भनिरोधक हो हो
Diazepam CYP2C19 सब्सट्रेटहरू हो हो
Armodafinil र modafinil को चेतावनी
दुबै आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले गम्भीर दागहरू निम्त्याउन सक्छ। यी औषधीहरू गम्भीर दागको स्थितिमा तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ। यी ड्रग्सहरू नलगाउनुहोस् यदि तपाईं तिनीहरूको कुनै पनि सक्रिय सामग्रीमा संदिग्ध एलर्जी छ भने।
दिन मा निन्द्रा सुधार गर्न को लागी armodafinil वा modafinil को खुराक समायोजित गर्न आवश्यक पर्दछ। खुराक अनुकूलन गर्दा, स्थिर निन्द्रा अझै पनि आउन सक्छ। तसर्थ, ड्राईभ गर्न वा खतरनाक गतिविधिमा भाग लिनदेखि जोगिनु महत्त्वपूर्ण छ जब आरमाड्याफिनिल वा मोडफिनिल जस्तो औषधि सुरू गर्दा।
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ विशेष गरी इतिहासको साथ मनोविकृति , उदासीनता, वा उन्माद। मनोवैज्ञानिक प्रभावको गम्भीर मामिलाहरूमा यी औषधिहरू अनुगमित गरिनु वा बन्द गर्नुपर्दछ।
उत्तेजक-जस्तो औषधिहरूले मुटु र हृदय प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई अनुगमन गर्न आवश्यक हुन सक्छ पहिले आरमोडाफिनिल वा मोडाफिनिल सुरू गर्दा। एक जना डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् यदि तपाईले छाती दुखाई, सास फेर्न वा धडपड (द्रुत धडकन) अनुभव गर्नुभयो।
आर्मोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
आर्मोडाफिनिल भनेको के हो?
आर्मोडाफिनिल यसको ब्रान्ड नाम नुविगिल द्वारा पनि परिचित छ। आर्मोडाफिनिललाई नर्कोलेप्सी र अन्य निद्रा विकारहरूबाट अत्यधिक निन्द्राको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो mg० मिलीग्राम, १ 150० मिलीग्राम, २०० मिलीग्राम, र २ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा आउँदछ।
Modafinil के हो?
Modafinil Provigil का सामान्य नाम हो। Modafinil FDA- अनुमोदित छ दिनको निन्द्रा को उपचार गर्न को लागी निद्रा विकारहरु को परिणाम। यसले अवरोधक निद्रा एपनियाको उपचार गर्न सक्छ, narcolepsy , र शिफ्ट कार्य डिसअर्डर।
के आर्मोडाफिनिल र मोडफिनिल एकै हुन्?
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले समान तत्वहरू समावेश गर्दछन् तर ती समान हुँदैनन्। आर्मोडाफिनिलले मोडाफिनिलको आर-एन्टाइमेर समावेश गर्दछ। Modafinil R- र S-modafinil को एक रेसमिक मिश्रण समावेश गर्दछ।
के आर्मोडाफिनिल वा मोडफिनिल राम्रो छ?
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल प्रभावकारिता र सुरक्षामा समान छन्। यद्यपि आर्मोडाफिनिल हुन सक्छ उच्च स्तर दिन को क्रम मा शरीर मा। आर्मोडाफिनिलका प्रभावहरू मोडाफिनिलको तुलनामा लामो समय सम्म रहन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा armodafinil वा modafinil प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन। गर्भावस्थामा आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनेल सिफारिश गरिदैन। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने डाक्टरसँग तपाईंको उपचार विकल्पहरूको छलफल गर्नुहोस्।
म रक्सीको साथ आर्मोडाफिनिल वा मोडफिनिल प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सी पिएर एर्मोडाफिनिल वा मोडाफिनिल लिनु सिफारिस हुँदैन। आर्मोडाफिनिल वा मोडफिनिलमा हुँदा रक्सी पिउँदा प्रतिकूल साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
के तपाईं सँगै armodafinil र modafinil लिन सक्नुहुन्छ?
आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल अक्सर सँगै लिदैनन्। दुबै आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिलले समान सक्रिय तत्वहरू समावेश गर्दछ। आर्मोडाफिनिल र मोडाफिनिल एकसाथ लिँदा प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढ्न सक्छ।
के armodafinil एक औषधि परीक्षणमा देखाउनेछ?
होईन। औषधि परीक्षणहरू सामान्यतया आर्मोडाफिनिलको लागि स्क्रिन गर्दैन। आर्मोडाफिनिल छैन एम्फेटामाइन एम्फेटामाइन को लागी गलत सकारात्मक दुर्लभ छ।
के तपाईं दिनदिनै armodafinil लिन सक्नुहुन्छ?
हरेक दिन लिने बित्तिकै आर्मोडाफिनिलले राम्रो काम गर्दछ। सामान्य रूपमा बिहान हरेक दिन एकै समयमा आर्मोडाफिनिलको एक खुराक लिन सिफारिस गरिन्छ।
एस्ट्रोजेन र estradiol बीच के फरक छ?
a1c को लागी सामान्य दायरा के हो
यदि म कमी छु भने मैले कती भिटामिन डी लिनु पर्छ?
योजना बी गोली लिए पछि के हुन्छ
रगत को सबै प्रकार के हो